मेरो उमेर १८ बर्ष भयो, आफुलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दिन…के गर्ने होला – jagritikhabar.com
म टिना ,१८ बर्ष को भए । केटा हरु देख्दा एक प्रकार्को ईमो आउछ । झन सर्टलेस केटा हरु देखे भने झनै ईमो आउछ । ल स्टोरी तिर जुम्, एक दिन
साथी ले उस्को डेड्-म्म नहुँदा मलाई घर मा साथी दिनु भनेर बोलाई । म पनि घर्मा भनेर साथीको घर गए । साथी र उस्को दाजु रैछ घर मा ।
दाई चै गोल खेल्नु जानु भको रोइछ । मलाई त्यो दाई एक्दम हेन्ड्सम लाग्छ । साथी दोकान गकी थि भरै पढ्दा निन्द्रालाग्छ भनेर चिप्स हरु लिनु, म खाना बनाएर बसिराथे दाई आउनु भो । गर्मिले
होला भेस्ट खोल्नु भाथियो, म त त्यो देखेर हेरे को हेरै भएछु बडी एक्दम से’क्सी थियो । कती खेर आएको फुच्ची भन्नु भो, मलाई त्यो दाई ले सधै फुच्ची भनेर बोलाउनु हुन्छ । मैले आघिनै भने, आनी दाई नुहाउन लाई बहिर कल मा जानुभो ।
म झ्याल बाट हेरी रहे दाई नुहको मलाई गएर दाईको सारीर रगड्न मन थियो तर क गर्ने मिलेन तेसो गर्न, तेइ भएर हेरेरै चित्त बुझाए । दाई नुहाई सकेर भित्र आउनु भो अनि के हेरे को फुच्ची त्यसरी
आरु नुहको हेर्नु हुँदैन भन्नु भो । म त लाज्ले भुतुक्कै भए आब क भन्ने भनेर । अनि म पनि क कम्, आरु नुहाको कस्ले हेर्या छ र ? तपाईं नुहको पो हेरेको त ।दाई टावेल मात्र बेर्नु भाथियो अनि बडी भरि पानी को थोपा हरु हेर्दै सेक्सी एन्ड हट देखिनु भाथियो । तेस्तो हेर्न मन भए रूम्मा आउ भन्नु भएर दाई रूम म जानु भो, मलाई क भो लाज नै हरायो म पनि दाई को रूम म गए । दाई छक्क पर्नुभो, जिस्के को पो त फुच्ची त साच्ची आको भन्नु भो । म के भनुम भनुम भो आनी ढाटुवा भने छु तेस्पछी दैले लु हेर फुच्ची भन्नु भो,,,,,,,,,,, अबुई! कत्रो रैछ दाइकोत
रतो-रतो लामो एन्ड मोटो । मत देखेर सीक भए छु,,,,,,,,, मत देखेर सी’क भए छु,,,,,,
साथी कती खेर सुत्छ र मलाई दाई को मा जुम भकोथियो । रात को तेस्तै १० बजोआनी साथीले आब सुत्युम भनो मलाई क्या खुशी लाग्यो आनी साथी सुती अनि म दाईको रूम म गए । दाई चुरोट तान्दै बसिरनु भकोरैछ । म आए पछी रिसाउदै कती ढिलो आको भन्नु भो । तलाई वेट गर्दा गर्दा १
प्याकेट चुरोट सिद्दो भन्दै हुनुन्थो, म त दाइको सारीर तिर मात्र ध्यान दिदैथिए सचिनै धेरै चु’रोट खानु
भएछ थुटा हरु टन्नै थियो टेबलमा । आईज बस भन्नुभो मलाई अप्ठयारो लगो ।
भरै त मलाईनी मजा आयो मैले नै दाइको … समतेर चुस्न थाले । दाईले मेरो … को टु’प्पो
चिमट्दै … माड्-मुड गर्न थल्नुभो म का मुक हुन थले झन जोड्-जोड्ले माड्-मुड गर्न थल्नु भो । म बेहोसी झै भै सकेको थे । झन दाइले मेरो ….सुम्सुमाई दिदा त म सल्याक्कै भाको थे । दाई ले मलाई हग गर्दै बेड मा पल्टाउनु भो अनि म माथी चडेर मेरो खुट्टा फ्या पारेर दाई ले उस्को लामो-रातो-मोटो …. मेरो सानो ….म जबर्जस्ती छिराउनु भो ।